COPD - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Adeegyada Caafimaadka > Tababbarka Caafimaadka > COPD
Waxbadan ka baro COPD iyo maaraynta calaamadaha.
Waa maxay COPD?
COPD wuxuu u taagan yahay Cudurka Sambabka ee Halista ah. Waxaa ku jira koox cudurada sanbabada ah oo xayira qulqulka hawada isla markaana dhib ku ah neefsashada, sida Emphysema iyo Bronchitis. Calaamadaha waxaa ka mid ah neefta oo ku qabata iyo qufac joogto ah gaar ahaan xabka. Emphysema wuxuu dhaawici karaa sambabaha oo uu weynaadaa waqti ka dib, taasoo keenta neefsasho la'aan. Waxaa jira 4 marxaladood oo COPD ah, iyadoo kuxiran sida ay u daran tahay. Markuu COPD sii socdo, waxay kadhigi kartaa neefsashada 10 ilaa 20 jeer ka adagtahay qofka sambabada caadiga ah leh. Dhakhaatiirtu waxay u isticmaalaan baaritaanada imaging, baaritaanka shaqada sanbabada, iyo baaritaanada dhiiga si loo ogaado COPD.
Sideen ku maamuli karaa COPD-kayga?
Maareynta COPD macnaheedu waa inaad si joogto ah u neefsato oo aad caafimaad qab ahaato. Caafimaad ahaanshaha waxaa ka mid ah xulashada cuntooyinka nafaqada leh iyo cabbitaanka maalin kasta.
Waxyaabaha qaarkood qorshahaaga daryeelka waa inuu ku jiraa waa:
Sigaarka iska daa
Cun midig oo jimicso
Si sax ah u qaado daawooyinkaaga
Maareynta culeyska fekerka - culeyska fekerka ayaa kicin kara ama ka dhigi kara astaamahaaga COPD
Waxyaabaha kale ee aad sameyn kartid si aad uga caawiso maareynta COPD-gaaga waa:
U isticmaal oksijiin si habboon
Ku celceli neefsashadaada
Baro farsamooyinka lagu soo qaado xab
Samee qorshe hawleed haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah
Kala hadal daryeel bixiyahaaga qorshahaaga daryeelka COPD
Marka lagaa helo COPD waxay noqon kartaa walaac badan. Abuuritaanka qorshe hawleed dhakhtarkaaga ayaa noqon kara tallaabada ugu horreysa ee lagula tacaalo cudurkaan. Qorshahaagu wuxuu u baahan yahay inuu tixgeliyo jadwalkaaga, sida aad u firfircoon tahay, dhaqankaaga asalka ah, caafimaadkaaga maskaxda iyo dhibaatooyinka kale ee caafimaad ee laga yaabo inaad qabto. Waxaad ubaahantahay inaad kaqeybqaadato abuuritaanka qorshahaaga daryeelka COPD. Haddii kale uma badna in qorshuhu ku habboon yahay noloshaada ama aad fahmi doonto waxaad u baahan tahay inaad sameyso. Raadi macluumaad dheeri ah iyo ilo kaa caawinaya maaraynta COPD-gaaga.